Xog Badan, Caqabado Badan | Martech Zone
Xog Badan, Caqabado Badan
Khamiis, Agoosto 8, 2013 Douglas Karr
Xog Weyn. Ma hubo idinka dadkiinii laakiin inta badan macaamiisheennu way ku dhex hafteen. In kasta oo tuulmooyinka xogtu ay sii kordhayaan, haddana waxaan caadi ahaan ogaannaa in inta badan macaamiisheennu aysan wax ka qabanaynin qaar ka mid ah istiraatiijiyadda suuq geynta aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah helitaanka, haysashada iyo hagaajinta qiimaha macaamiisha. Intaas oo keliya maahan, waxay la halgamayaan kala-goys weyn oo u dhexeeya IT-ga iyo suuq-geynta. Shalay uun, waa inaan lahadlaa mid kamid ah macaamiishayada 'IT team' si aan u sharaxo sida pop blockers ay uga hortagayaan awooda ay dadku ugula xiriiraan shirkada bulsho ahaan maxaa yeelay dhamaan isku xirnaantooda bulsheed waxaa loogu tala galay daaqadaha. Ma ahan inaan sharaxaad ka bixiyo in… kooxda IT-da ay ahayd inay si fudud u adeegaan codsiga.
Sida laga soo xigtay Xog uruurinta Daraasada Suuqgeynta Xogta ee Teradata 2013, suuqleyda ayaa si aad ah ugu tiirsan isla markaana isticmaalaya qaabab caadi ah, fudud, oo si fudud loo heli karo oo xog ah si loo wado dadaalkooda suuq geynta. Xaqiiqdii, 75% ama in kabadan kuwa la daraaseeyay waxay adeegsadaan xogta adeegga macaamiisha, xogta qanacsanaanta macaamilka, xogta isdhexgalka dhijitaalka ah (tusaale ahaan, raadinta, xayeysiiska muujinta, iimaylka, shabakadda shabakadda), iyo xogta dadka, iyadoo in kabadan kalabar ay adeegsanayaan xogta sida kaqeybgalka macaamiisha (tusaale, adeegsiga badeecada ama xogta doorbidida), macaamil ganacsi (tusaale ahaan, dhaqanka iibsiga qad la'aanta), ama xogta e-commerce.
Sidee ayey suuqleyda maanta runti u arkaan awooda ay u leeyihiin inay ka faa’iideystaan ​​oo ay ka faa’iideystaan ​​xog badan si ay u soo saaraan natiijooyin la qiyaasi karo? Ku quusin suuq geynta xogta ku wadata Xog-ururinta Suuqgeynta Xogta-Daraadeed ee Teradata, 2013, Natiijooyinka Caalamiga ah ee infographic:
Tags: isku xirkaxog weyncmoitistaraatijiyadxogta tera
Adeeg Bixiyaha Adeegga E-mail SaaS Qiimaynta
Naqshadeynta jawaabta, saxitaanka saxda ah